Qof rayid ah oo goor dhow lagu dilay mid ka mid ah isgoysyada Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
DEGDEG: Mid ka mid ah Isgoysyada Magaalada Muqidsho waxaa goor dhow oo maqribnimadan ah lagu toogtay Qof, sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah.
Koox ku hubeysan Bastoolado oo la sheegay in ay wateen Mooto Bajaaj ayaa toogtay Qofkan xilli uu ku sugnaa isgoyska Afarta Jardiino, iyaga oo dhor xabadood kaga dhuftay qeybta sare ee jirkiisa, kadib goobta ayay ka baxsadeen.
Dadka Degaanka ayaa ninka la dilay magaciisa waxa ay ku soo koobeen Amadi, Ciidanka ammaanka Dolwadda Fedeelaka ayaa wxaa ay gaareen goobta uu dilka ka dhacay, waxaana ay halkaasi ka qaadeen Marxuumka la dilay.
Sidoo kale Ciidamada oo wata Gaadiidka Dagaalka ayaa waxa ay halkaasi ka wadaan Howlgallo lagu raadinayo raggii ka dambeeyay dilkan.
Magaalada Muqdisho waxaa maalmahan ka socda beegsiga lagu haayo Odayaasha soo xulay xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka iyo Askarta Dowladda, waxaana inta badan dilalkooda dusha saarta Shabaab.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) oo dhowaan kulan la Don’t want to spend a premium for your cymbalta? This is a solved issue, as you can buy it at our store now for only 0.99 USD! qaatay Taliyeyaasha Ciidamada ayaa kala hadlay dilalka ka dhaca Muqdisho, wuxuuna ku amray in ay soo qabtaan ragga dilalka geysta ama ay xilalka tiriyaan.
Warqado Digniin ah Oo lagu Daadiyay Suuqa Weyn Ee Bakaaraha (Akhriso)